Inona avy ireo fomba fanao tsara indrindra ahafahana miverina amin'ny toeran'ny Youtube?
Araka ny loharanom-baovao samihafa, YouTube dia iray amin'ireo sehatra media lehibe indrindra eran-tany miaraka amin'ireo fikarohana 3 lavitrisa isam-bolana ary 5 tapitrisa nojiana isan'andro. Izany no fahafahana tonga lafatra hanatsarana ny toerana misy anao amin'ny alàlan'ny sehatra media amin'ny alàlan'ny fananganana fanentanana fananganana rindrambaiko. Ny lahatsary tsara dia tsara ho an'ny fikarohana malaza dia azo antoka fa mitondra fiara mifamadika ao amin'ny tranokalanao. Izany dia hampitombo ny isam-baolinao any amin'ny milina fikarohana ary hanampy hampitombo ny fankasitrahana ny marika. Na izany aza, tokony tsy tokony hampifantoka ny lanjan'ny rakitra ho an'ny lahatsary Youtube ianao. Ny tokony hifantohanao dia tokony ho amin'ny kalitao sy ny maha-zava-dehibe ny backlinks ianao no mamorona - judi online images.
Amin'ity lahatsoratra ity, hiresaka momba ny fomba hananganana tranokalan'ny tranonkala tsara tarehy ao amin'ny YouTube izahay ary hahazo ny laharana ambony indrindra.
Ahoana no ahafahana mamadika rindry ho an'ny horonan-tsarinao YouTube?
Ireto misy safidy roa azo raisina amin'ny rohy ao amin'ny YouTube:
Mampiasa ny fantsona YouTube anao manokana, izay manome fahafahana anao hamorona rohy mankany amin'ny tranokalanao sy ireo profil sosialy hafa
Amin'ny fanampiana ny famaritana ny lahatsary navoakanao
Ahoana ny fomba ahazoana ny rohy fantsona?
Mba hahazoana ny rohy fampisehoana, mila mamorona profil ianao, mameno ny fampahalalana rehetra ilaina, ary manapaha tena eo an-damosinao. Eto dia mora sy tsotra ny zava-drehetra. Miantehitra amin'ny rohy mankany amin'ireo profil media sosialy ary nandefa sarimihetsika fantsom-peo YouTube. Afaka manisy rohy ireo tompona channel YouTube rehetra. Ataovy azo antoka fa tsy misy tononkalo misy fiantraikany eo amin'ny tarika ireo rohy ireo.
Ahoana no ahazoana rohy amin'ny lahatsary alefanao?
Voalohany indrindra, alefaso any amin'ny YouTube ny lahatsarinao. Ataovy azo antoka fa mahafinaritra sy mahaliana. Ny lohatenin'ny lahatsarinao dia tokony hisaintsaina ny votoatin'ny video. Ankoatra izany, tokony atao marika ny hanolotra hevitra ho an'ireo mpampiasa azy. Ilainao ny mampakatra afa-tsy horonantsary afa-tsy horonantsary sy tokana fotsiny raha toa ka tsy hanome lanjany be loatra ny lahatsary efa misy vokatra. Amin'ny sehatra faharoa, mila mametraka rohy ianao eo amin'ny famaritana lahatsary. Ity rohy ity dia tokony hijery tsara ny votoatiny. Raha tsy izany, ny mpiserasera dia mihevitra azy io ho toy ny dokam-barotra ary tsy manaraka ny rohyo. Ataovy azo antoka fa mametraka ny rohy mifandraika akaiky eo an-tampon'ny fanoritsoritanao ianao. Io no toerana tsara indrindra ahafahana mampifandray rohy raha tena mety ho azo tsindry amin'ny tsaratsara kokoa.
Ahoana no ahafahanao mandray soa avy amin'ny backlink amin'ny horonan-tsarinao YouTube?
Ny rohy nampidirina ao amin'ny lahatsarin'ny lahatsary dia manana anjara toerana lehibe amin'ny antony sasany. Voalohany, raha toa ka farafahakeliny 3% amin'ny mpijery horonan-tsarimihetsika no hikirakira ny rohy misy ny tranonkalanao, dia afaka miezaka amin'ny mpitsidika tranonkala maherin'ny 30.000 sy ny mpanjifa mety aminao. Alao sary an-tsaina fa mety ho avo kokoa io isan-jato io. Amin'ity tranga ity dia hisy fiantraikany amin'ny fifamoivoizana avy any amin'io tambajotra ara-tsosialy io ary mety hanova tanteraka ny toerana misy ny tranonkala. Ankoatra izay, raha misy rohy iray manondro pejy maimaim-poana, Google dia handinika tsara kokoa ny lanjan'ny rohy misy anao.
Tsara ny manamarika fa ny lahatsoratry ny youtube lahatsary dia mitranga amin'ny tranga iray raha mahafeno ny kalitao. Izany no antony ilainao mba hahazoana antoka ny mamorona kalitao sy mampiditra votoaty video izay manan-danja amin'ny tsenan'ny tranonkala anao.